Rakanyorwa nemapenzi kuverengerwa nembeciles ... | Martech Zone
China, December 21, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Mr. Rago, mutevedzeri wemupepeti ane mupepeti kuThe Wall Street Journal, zvine mutsindo aderesi iyo blogosphere se:
Iyo Blog Mob: Yakanyorwa nemapenzi kuti iverengerwe nembeciles.
Uku ndiko kungave kurwisa kwekunyepedzera uye kwekuzvitutumadza kwandakaona neine Nyanzvi yePepanhau parizvino! Semunhu aimbove nyanzvi yepepanhau, zvinoshungurudza chaizvo kuona maitiro aya. Zvakatoipisisa, ini ndiri fan weWall Street Journal. Panzvimbo pekugamuchira iyo "ruzivo rwepamusoro-soro" mapepanhau anofunga kuti inofanirwa kuchengetedzwa se "ruzivo mutero mugwagwa"… uye "nzira yekuenda-imwe" ipapo.
Mr. Rago, ndine hurombo kuti urikutadza kutonga pamusoro pekutsanangura, kusefa, uye kugadzirisa ruzivo tisati 'tabvumidzwa' kuti tigure. Ndine urombo kuti ini ndinoshaya mazwi uye girama hunyanzvi hwemumwe munhu wehurefu hwako. Zvichida maonero ako ane chekuita nemaonero evamwe vese e dzako Chigadzirwa:
Kana izvi… Technorati tichienzanisa:
Mr. Rago, ungangoda kutarira benzi iri… arikukwezva mashoma embeciles (pasi kurudyi kona):
Ndiri kutarisira kuenzanisa kuverenga kwedu gore rinouya… kana uriko. Ndine chokwadi kuti uchave.
Dec 27, 2006 pa 3: 23 AM
Kune nguva dzose kune imwe moron kunze uko inofunga kuti iye / iye anoziva zvese. Zviripachena, haana kana pfungwa yekunyora zvakadzikama nzvimbo pakutanga ... hei heino pfungwa… pamwe ari kunetseka kuti mumwe ari nani (Doug) blogger achauya pamwe otora basa rake kubva kwaari? 8)